Yangu Inotevera Kuverenga: Giravhiti Kushambadzira | Martech Zone
Tevere kumusoro pane yekuverenga runyorwa (iri kunyatso kuunganidza) iri Giravhiti Kushambadzira.
Ivo vanhu vakanaka paWiley vakanditumira iyo Yekushambadzira Bhuku - ivo vanofanirwa kunge vakave vanoziva kuti ini ndiri anoyamwa emabhuku Ekushambadzira. Kuneavo vanodzivisa mabhuku ebhizinesi senge denda asi vanoda kudzidza hunhu hwevanhu… ndizvo zvandinoda nezveMabhuku ekutengesa.
Mumwe munhu akandibvunza kamwe kana ndakanga ndadzidza Sociology. Ndinofunga ndine neimwe pfungwa… ndinotenda ndizvo zviri kushambadzira. Handitaure kuti ndinonzwisisa zvakawanda pamusoro pehunhu hwevanhu, asi ini ndinoda kuzviona uye nekugovana zvandinoona.
Giravhiti Kushambadzira, Iyo Sayenzi Yekukwezva Vatengi, ine kavha yakapusa, yakapusa nzvimbo, rakapusa blog, uye nerinotsvedza tsananguro:
Giravhiti Kushambadzira kunopa vanamuzvinabhizimusi, varidzi vemabhizimusi, vanhu vekutengesa uye vezvekutengesa nzira yakapusa yekukwezva vatengi nekuvhara kutengesa vasina kuita mabasa ekutengesa emawoko sekufona kutonhora, kutsvaga kana kukumbira bhizinesi.
Rakanyorerwa vanhu vanoshuvira kutengesa, purofiti, vatengi nemari muhomwe asi vachizoda kuzviita pasina basa remaoko, bhuku iri rinoburitsa misimboti yekukwezva zvisikwa zvevatengi uye zviri nyore uye pasina kushambadzira kutengesa pasina pushy, in¬your¬face, hardsell maitiro. Inobatanidza mazano anoshanda anoenderana nenzira dzakaedzwa uye dzakapupurirwa nezvinyorwa zvematangi, marefu-waya-pasina-net yekutengesa uye zviitiko zvekushambadzira.
Ini handisi wekunyepedzera, asi ini handidi tonga bhuku nebutiro raro [zvakaitirwa]. Iwo makotesheni kubva kune vamwe vanyori anonzwika senge bhuku rinoseka, rakaoma-kurova, uye kumeso kwako. Izvo hazvinzwika sezvakatsetseka sezvishambadziro… zvinoita kunge bhuku randichanyatsonakidzwa.
Unogona kurodha pasi excerpt yeGravitational Kushambadzira pawebhusaiti yevanyori. Ini ndichagovana maonero angu ebhuku mumasvondo mashoma kana ndangopedza.
Tags: kukwezva vatengikushambadzira kwemagetsiJimmy VeeJoel Bauerbhuku rekushambadziraTravis Millerwiley
Yakadzingwa: MyBlogLog uye BlogCatalog Widgets
Izvi zvinoita sebhuku hombe. Ndinoshuva kuti dai vanditumira kopi kuti ndiverenge nekudzokorora. Ini ndinoiwedzera kune yangu runyorwa, iyo iri kukura nekukwakuka uye miganhu izvozvi.
Ini ndinoda zano rekuti vatengi vauye kwauri - kuburikidza negiravhiti. Ndiyo nzira yakanakisa, kana mutengi achitenda kuti vaida chigadzirwa pakutanga, kwete kuti iwe wakasundira chigadzirwa pavari. Kutenda nemisoro iri pamusoro pebhuku iri.